USapho kunye neSilo-qabane esiLungileyo Phuma kwiiDunes zasendle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguColleen
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uColleen iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Khaba iinyawo zakho phezulu kwaye uphumle kweli khaya litofotofo, losapho & nesilwanyana esinobuhlobo kwi-Wild Dunes! Ifakwe kwindawo yaseTwin Oaks, ukuhambo olufutshane okanye ukukhwela ibhayisekile kude nolwandle, amachibi, igalufa kunye nebala lokudlala. Ngaba unaye umlandeli omncinci we-Star Wars kusapho lwakho? Bayakuthanda ukulala kwigumbi elineentloko le-Star Wars, elizaliswe zizinto zokudlala ezonwabileyo ukuba bazonwabele xa bengadlali elunxwemeni. Ngaba inja yakho iziphatha kakuhle kwaye iya kuyo yonke indawo oya kuyo? Ilungu losapho lwakho elinoboya lamkelekile ukuba lihlale nalo!
Eli khaya lolwandle linendawo yokupaka izithuthi ezi-4, i-wifi, ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo, eyadi yabucala (engabiyelwanga) ngasemva, igriza yegesi, ivaranda ekhuselweyo kwaye ibandakanya iWild Dunes "Sports Pass" ebonelela ngofikelelo olusimahla kwiWild Dunes Swim Centre (ngonyaka wonyaka. ichibi elishushubezayo), ufikelelo lweZiko lokuQinisekisa (umrhumo wemihla ngemihla), ufikelelo lweZiko leTennis (umrhumo wokurenta inkundla), kunye nokufikelela okuthobileyo kwiPalm Cove kunye neGrand Pavilion Pools emva kwentsimbi yesine yonke imihla. Kukwakho newasher egcweleyo kunye nesomisi kwaye zonke iitawuli zokuhlambela kunye neelinen zinikiwe. Iimayile ezili-17 kuphela ukuya kwidolophu yaseCharleston eyimbali.
I-Wild Dunes yindawo entle, enesango, elunxwemeni lwase-Isle of Palms, SC. Iqhayisa ngeekhilomitha zeendlela zebhayisekile, iivenkile zokutyela, iindawo zokutyela, iilwandle ezintle, iikhosi zegalufa ezi-2 zobuntshatsheli, ukuqubha, intenetya, indawo yokomelela, indawo yokudlala nokunye! Iikhilomitha ezili-17 kuphela ukuya kwidolophu yaseCharleston eyimbali kwaye kufutshane namasimi, ivenkile kunye neendawo zokutyela ezintle!
IiPropathi zePicket Fence ziyafumaneka ukuze zikuncede ngenkqubo yokubhukisha kwaye uphendule nayiphi na imibuzo ngaphambi kokufika kwakho okanye ngexesha lokuhlala kwakho. Sijonge ukukubonelela ngolonwabo, ukuphumla, ukuhlala ungakhathazeki!
IiPropathi zePicket Fence ziyafumaneka ukuze zikuncede ngenkqubo yokubhukisha kwaye uphendule nayiphi na imibuzo ngaphambi kokufika kwakho okanye ngexesha lokuhlala kwakho. Sijonge…